के मृत्युपश्चात पनि नङ्ग र कपाल बढ्छ ? | Ratopati
के मृत्युपश्चात पनि नङ्ग र कपाल बढ्छ ?
तब किन कहानीमा यस्तो कुराहरु भन्ने गरिन्छ ?हुन त यस्तो अनधाुमान गलत किनकि यसको पछाडि जैविक आधार छ । यस्तो होइन कि मृत्युपश्चात नङ्ग बढिरहन्छ तर यसको चारैतिरको छाला सुकिरहन्छ जसका कारण नङ्ग लामो देखिन्छ । मृतकको खप्परको छाला पनि सुक्दै जाने भएका कारण कपाल लामो जस्तो देखिने गर्दछ ।